आमाको पुण्य तिथीमा नायिका ऋचा शर्माको भावुक स्टेटस – ‘आमा ! म एक वर्षदेखि भोको छु’ « नारी खबर >
आमाको पुण्य तिथीमा नायिका ऋचा शर्माको भावुक स्टेटस – ‘आमा ! म एक वर्षदेखि भोको छु’
आमाबीनाको जीवनलाई उनी परिभाषा गर्दै लेख्छिन्, ‘उहाँबिनाका यी ३६५ दिन मेरो जीवनको एउटा रित्तो पाना हो, जसमा अक्षर र वाक्य छन् तर अर्थ र आत्मा छैन ।’
अन्त्यमा उनले आफू विगत एक वर्षदेखि आमाको मायाको भोको भएको बताएकी छिन् । उनी लेख्छिन्, ‘आमा ! सन्तानहरु मायाका भोका हुन्छन् । म एक वर्षदेखि भोको छु र यो भोक जीवनभरी मेटिनेछैन ।’